Download Latest Version of My Talking Angela Mod Apk for Android: Discover ဖွယ်ပြောစကား Angela ကမ္ဘာကြီးနှင့်သူမ၏ Vogue customize, ဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်း, အောင်-Up နှင့်လူနေအိမ် – အားလုံးစွဲချစ်စရာ mini ကိုဂိမ်းများကိုခံစားသော်လည်း.
ကျော်နှင့်အတူ 165 သန်း downloads, ပြီးသား ... အပျော်စရာအပေါ်ထွက်လက်လွတ်မ!
ကလေး Angela မွေးစား
သင့်ရဲ့အလွန်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဒစ်ဂျစ်တယ်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အဖြစ် Angela ဆောင်ရွက်ရန်နှင့်သူမ၏တစ်ဦးထိပ်တန်းဘဝကိုထောက်ပံ့ပေး! တစ်ဦး classy မြို့တော် kitty သို့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သူမ၏ Assist. အဝတ်ကိုဝယ်ယူရေးဖို့နိန်သွား မှစ. - သူမကအားလုံးဥစ္စာင်!
Angela သင့်ရဲ့အလွန်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအနုပညာရှင် Make! သူမ၏ပြုစုပျိုးထောင်, သူမ၏သီခငျြးဆို, သူမ၏ scrumptious ရယူထားသောအစာကျွေး. ရိုးရှင်းစွာအစောင့်ကြည့် - သူမကအသစ်ရဲ့အကောင်းဆုံး PAL ဖြစ်ထွက်လှည့်ပါလိမ့်မယ်!
မျက်နှာသာထွန်းလင်းသင့်ရဲ့လှပသောသဘောမျိုးဖွယ်ပြောစကား Angela တစ် mode ကိုလုပ်-ကျော်ပေးခြင်းအားဖြင့်အားဖွငျ့ကြစို့!
နှုတ်ခမ်းဆိုးဆေးတောင့်, eyeshadow, မျက်နှာနီလာ – သင့်ရဲ့နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာရဲ့အကြောင်းအရာပစ္စည်းမှ customize! အမျိုးမျိုးသောအရောင်အဆင်းနဲ့မရေမတွက်နိုင်အောင်တီထွင်လွတ်လပ်ခွင့်များစွာနှင့်အတူ; သငျသညျဖြစ်နိုင်သည်သင့်ရဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတကယ်တိကျတဲ့နိုင်!
သငျသညျအလွင့်, ဒါကြောင့်လည်း Angela အလွအောင်! နောက်ဆုံးပေါ်ဖက်ရှင်တွေနှင့် cutest ဝတ်စုံအတွင်းသာ costume သူမ၏, ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ဘဲလေးကသမားထံမှပန့်ခ် Ninja ကိုမှ! အပြည့်အဝလည်းသူမ၏ညာဖက် coiffure ပေးခြင်းအားဖြင့်ကြည့်! သန်းတချက်တွင်လုံးဝကွဲပြားခြားနားသော Vogue combo နှင့်အတူ, သငျသညျဖြစ်နိုင်သည်ကယ့်ကိုထူးခြားတဲ့တစ်ချက်ဖန်တီးနိုင်ပါတယ်!
cheat အင်ဂျင် APK ကို Android အတွက်နောက်ဆုံး v6.5.2 & PC ကို - ဒေါင်းလုပ်
ROBLOX APK ကိုဒေါင်းလုပ် – Android အတွက်အခမဲ့စွန့်စားမှု GAME
အိတ်ကပ် MapleStory 1.0.1 APK ကို | ဒေါင်းလုပ်
အံ့သြဖွယ်အသစ်များကို mini ကိုဂိမ်းများကိုဖော်ထုတ်နှင့်ဆော့ကစား! ပူဖောင်းသေနတ်သမားနှင့်အတူလုံးဝပျော်ရွှင် Hook တက်ကနေ – သင့်ရဲ့အကြိုက်ဆုံးအပေါငျးတို့သညာဘက်ဒီမှာပါ ... နှင့်အပိုပုံမှန်ထည့်သွင်းထားပါသည်!
ထူးခြားတဲ့သစ်ကိုမတ်မတ်သော့ဖွင့်, ဒီဂရီတက်, အထူးသဖြင့်စတစ်ကာများစုပြုံ, သူမသငျသညျဆိုသညျကားလူအပေါင်းတို့သည်အပိုငျးပိုငျးကို repeat အားလုံးသော်လည်း ... သူမ၏အလွကျိန်းဝပ် customize – ရိုးရာ Angela အမျိုးအစားထဲမှာ!
ဒီ app PRIVO လိုင်စင်ရဖြစ်ပါတယ်. အဆိုပါ PRIVO လုံခြုံဆိပ်ကမ်းတံဆိပျကို Outfit7 သင့်ရဲ့သူငယျတစျယောကျရဲ့ပုဂ္ဂလိကအင်ဖိုစောငျ့ရှောကျဖို့ COPPA လိုက်နာပုဂ္ဂလိကအလေ့အကျင့်ကိုထူထောင်ထားပြီးနေတဲ့အကြောင်းအချက်ပြ. ကျွန်ုပ်တို့၏ apps များဟာသူတို့ရဲ့အချက်အလက်ဝေမျှဖို့နုပျိုလူငယ်ခွင့်မရ.
အစိုင်အခဲ Streamz APK ကို Android အတွက် Download
Vigo ဗီဒီယိုကို Download လုပ်ပါ – ယခင်က Hypstar 3.8.1 APK ကို
စနူကာရေကူးကန် 2018 APK ကိုဒေါင်းလုပ် – Android အတွက်အခမဲ့အားကစား GAME
မာကိုပိုလိုဗီဒီယို Walkie Talkie အတိုင်း APK ကိုဒေါင်းလုပ်
Freddie Apk နောက်ဆုံးဗားရှင်းလျင်မြန်စွာဒေါင်းလုပ်မှာငါး Nights
ဒီ app comprises:
– Outfit7 ရဲ့ကုန်သွယ်၏မြှင့်တင်ရေးနှင့်ဆက်စပ်မြှင့်တင်
– ကွဲပြားခြားနားသော apps များနှင့် Outfit7 ၏ဝက်ဘ်ဆိုက်များ hyperlinks ကြောင်းတိုက်ရိုက်ဖောက်သည်
– တစ်ချိန်ကပိုပြီး app ကိုကစားရန်ဖောက်သည်ကိုသှေးဆောငျဖို့အကြောင်းအရာပစ္စည်း personalization
– အသုံးပြုမှုစေနှင့်လူမှုရေးကွန်ရက်များမှတဆင့်သူငယ်ချင်းများနှင့်အတူ join ဖို့အခွင့်အလမ်း
– You Tube ပေါင်းစည်းမှုမှတဆင့် Outfit7 ရဲ့ကာတွန်းဇာတ်ကောင်ရုပ်ရှင်တွေအကဲခတ်
– In-app ကိုဝယ်ယူမှုစေရန်အဆိုပါရွေးချယ်မှုကို
– ဆက်စပ်ပစ္စည်းများဒစ်ဂျစ်တယ် Forex အတွက်အမျိုးမျိုးသောကုန်ကျစရိတ်များအတွက်တွေ့နိုင်ပါသည်, အဆိုပါပါဝင်သူအားဖြင့်ရောက်ရှိခဲ့သည်ပစ္စုပ္ပန်ဒီဂရီအပေါ်မှီခို
– entry ကိုမှအမျိုးမျိုးသောရွေးချယ်မှု In-app ကိုမဆိုအောင်ထွက်နှင့်အတူပလီကေးရှင်းများအားလုံးရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုအမှန်တကယ်ငွေသားအသုံးချဖို့ဝယ်ဖို့ (ဒီဂရီတိုးတက်မှုကို, ဂိမ်း, In-ဂိမ်းရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်တွေကို, ကြော်ငြာ)
ယာဉ်အသွားအလာ Rider Download (ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး, Unlimited ငွေ) | Android အတွက်အကောင်းဆုံး Apps ကပ
ဟင်းချက်အားကစားပြိုင်ပွဲ APK ကိုဒေါင်းလုပ် – Android အတွက်အခမဲ့ခြင်း simulation GAME
APK ကိုဒေါင်းလုပ်ကွောဆှဲ – Android အတွက်အခမဲ့ Entertainment က APP ကို- လက်ကိုင်ဖုန်းများအတွက်အကောင်းဆုံး Apps ကပ
Google Docs APK ကိုဒေါင်းလုပ် – Android အတွက်အခမဲ့ Productivity APP
ဗိုလ်ကြီး Tsubasa: အဖွဲ့ APK ကိုဒေါင်းလုပ် Dream – လက်ကိုင်ဖုန်းများအတွက်အကောင်းဆုံး Apps ကပ
ခြုံနွယ်သစ်ပင်များလွှမ်း Dubby Saga 1.8.0 APK ကို – အကောင်းဆုံး Apps ကပမိုဘိုင်းအတွက် Download
မိုက်ကရိုဆော့ဖ Edge APK ကိုဒေါင်းလုပ် – လက်ကိုင်ဖုန်းများအတွက်အကောင်းဆုံး Apps ကပ
YouTube ကို Go ကို 0.26.67 beta ကို (လက်) (nodpi) (အန်းဒရွိုက် 4.1+) APK ကိုဒေါင်းလုပ်